Umvelisi wegama eligqithisiweyo-yenza ipassword ekhuselekileyo
ikhaya/Umvelisi wegama eligqithisiweyo-yenza ipassword ekhuselekileyo
Amaphasiwedi akhuselekileyo abaluleke kakhulu kwezi ntsuku. Ngoncedo lomenzi wegama eligqithisiweyo uyakufumana iphasiwedi ekhuselekileyo kwimizuzwana embalwa .Kubalulekile ukuba indibaniselwano phakathi koonobumba kunye namanani kunye nabalinganiswa abakhethekileyo bayasetyenziswa. Kubaluleke kakhulu ukuba uvelise amagama agqithisiweyo alithoba kuyo yonke iwebhusayithi.
Yenza iiphasiwedi ezikhuselekileyo kunye nomenzi wegama eligqithisiweyo
Umvelisi wegama eliyimfihlo le-Intanethi-Yenza iiphasiwedi ezikhuselekileyo simahla
Thintela ukuphazamiseka kolwaphulo-mthetho kunye neepassword ezikhuselekileyo nezethu Umvelisi wegama eligqithisiweyo... Kwaye kwakhona isixa esikhulu sokwebiwa kwedatha yeedilesi ze-imeyile kunye neephasiwedi zaba loluntu kwaye ingozi yolwaphulo-mthetho olunje ihlala ihleli.
Ngesi sizathu, uninzi lweengcali zokhuseleko kuthungelwano zilumkisa ngokuchaseneyo nobusela, kwaye, ngaphezu kwako konke, umonakalo obangelwe sisiphumo sabo bachaphazelekayo.
Ukuze uzikhusele, kubalulekile ukuba ikhompyuter yakho ifakwe kunye neenkqubo ezifanelekileyo ze-antivirus, ii-firewalls kunye nohlaziyo lwenkqubo yokhuseleko rhoqo
kwaye ugcine iipakethe zenkonzo yangoku "zicocekile". Iinkqubo zomsebenzisi eziqhelekileyo nazo kufuneka zigcinwe zihlaziyiwe, njengoko i-Intanethi ihamba ngokukhawuleza okukhulu.
Kungcono ukucima izihlomelo ze-imeyile ezingaziwayo kwangoko kwaye ungacofisi naziphi na izixhumanisi eziqulethe.
Kuyimfuneko ngokupheleleyo EMMER ukusebenzisa iphasiwedi entsha!
sebenzisa NOT iphasiwedi efanayo yeeakhawunti ezahlukeneyo / zobhaliso!
Yenza kunye neyethu Umvelisi wegama eligqithisiweyo ngokuqinisekileyo password Finder
Ezi phaswedi zichazwe ngokungacwangciswanga kunye nezethu Umvelisi wegama eligqithisiweyo kwaye ubandakanye iikhrayitheriya ezicetyiswe ziingcali zokhuseleko:
Ubude begama eligqithisiweyo: ubuncinci i-8 kwaye ngakumbi uninzi lwabalinganiswa
Umdibaniso wamanani kunye nabalinganiswa abakhethekileyo kunye noonobumba abakhulu nabancinci
Luphephe ulwazi ngawe njengegama, usuku lokuzalwa kwakho okanye amalungu osapho okanye abantu abadumileyo okanye izilwanyana zasekhaya
Kunqande ukugcina ipassword yakho kumanqaku okanye nakwiselfowuni
Ungaze unike nabani na ipaswedi yakho
Ukuthathela ingqalelo zonke iikhrayitheriya ezicetyiswayo zokuba ukhuseleke Amaphasiwedi, Kunzima ngendlela emangalisayo ukuba ubakhumbule. Kodwa uncedo ngoku luyafumaneka koku.
Sebenzisa umphathi kukuvumela ukuba uphathe ipassword yakho ekhuselekileyo ngokukhumbula ipassword enye kuphela.
Die Amagama agqithisiweyo zigcinwa ngendlela ebhaliweyo kwaye oko kwenza ukuba ukufikelela okungagunyaziswanga kunye nokuqhekeka kwepaswedi kube nzima ngakumbi
Thintela ungenelelo lolwaphulo-mthetho ngokusebenzisa ukhuseleko password sebenzisa!
Ukuba awuqinisekanga ukuba uyachaphazeleka bubusela beedatha, ungakujonga oku kwiwebhusayithi ye-BSI (iOfisi yaseburhulumenteni yoKhuseleko loLwazi).
Ukuthintela ungenelelo lolwaphulo-mthetho kunye neephasiwedi ezikhuselekileyo ... Kwaye kwakhona isixa esikhulu sokubiwa kwedatha yeedilesi ze-imeyile kunye neephasiwedi zaye zasesidlangalaleni kwaye ingozi yolwaphulo-mthetho olo luhlala lukhona.
Sebenzisa i-password yethu ngegama eligqithisiweyo
Iimpawu: kwi-Intanethi, Umvelisi, inombolo yokuvula, yenza i-intanethi, Inombolo yokuvula, yenza iphasiwedi, Umvelisi wegama eligqithisiweyo
Windows 11 Iingcebiso zokwenza ubuChule kwiiVidiyo. Ngaba ufuna Windows 11 iingcebiso kunye namacebo? Unathi uya kufumana imiyalelo eluncedo, izifundo zevidiyo kunye nolwazi oluncedo ukulungiselela iiWindows zakho.
Bonisa igama lokugqithisa le-wifi
GPT okanye MBR? Iindlela ezi-3 zokufumanisa
Uninzi lwezithuba ezidumileyo
Nantsi indlela onokufumana ngayo ifolda yokuQalisa kuyo Windows 11
Ukuba ungaphantsi kweminyaka eli-16 kwaye ufuna ukunika imvume yakho kwinkonzo yamavolontiya, kufuneka ucele imvume kumgcini wakho osemthethweni. Sisebenzisa iikuki kunye nobunye ubuchwepheshe kwiwebhusayithi yethu. Ezinye zibalulekile, ngelixa ezinye zisinceda siphucule le webhusayithi kunye namava akho. Idatha yobuqu inokucutshungulwa (umzekelo, iidilesi ze-IP), umz. B. yeentengiso ezenzelwe wena kunye nomxholo okanye intengiso kunye nomlinganiselo womxholo. Unokufumana ulwazi oluninzi malunga nokusetyenziswa kwedatha yakho kwinqaku lethu yemfihlo. Apha unokufumana isishwankathelo se cookies ezisetyenzisiweyo. Unganika imvume yakho kuwo onke amacandelo okanye ufumane ulwazi oluthe kratya luboniswe kwaye ke ukhethe ii-cookies ezithile.